Iindaba-Ukongeza kwixabiso, zeziphi ezinye izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa uthenga i-jammer yesiginali?
Inkqubo yeJamming ejele
Isithuthi Shield Jammer
Igumbi lokuHlangana ngaphakathi kwiFowuni yeJammer
Isiginali yeRadio Signal Jammer
Isandla esibambe ngesandla seJammer
I-UAV engamanzi i-Drone Jammer
Inkqubo yeBhombu eShukumayo eShukumayo eShukumayo
Uphawu lweGPS Jammer
Igumbi lokuhlangana leSelfowuni yokuDumba kweziSombululo
Isisombululo seJamming ePhakamileyo yamandla
Inkqubo epheleleyo yoPhuculo lweZithuthi eziPhakamileyo
Ukongeza kwixabiso, zeziphi ezinye izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa uthenga i-jammer yesiginali?
Izinto ekufuneka ziqwalaselwe kukhetho lwezixhobo zejammer yeselfowuni:
Ukukhetha umqondiso wefowuni yejammer kukulungele. Musa ukuthemba nayiphi na into enkulu. Ixabiso ayisiyiyo eyona nto iphambili kuyo. Nokuba umqondiso wefowuni yeselfowuni ufanelekile unokubonwa kwizatifikethi ezahlukeneyo zenkampani, izixhobo ezisetyenzisiweyo, kunye nokulungisa ukulungisa iteknoloji. Kukho iimfuno ezisisiseko ekukhetheni kwejammer yefowuni ephathekayo. Ukuba kukho ubhaliso lwenkampani ngokusesikweni, nokuba kukho uphawu lwentengiso olubhalisiweyo, njl.njl. Ungacela umenzi ukuba abonelele ngomqondiso weselfowuni wokulungisa iifoto, iifoto zangaphakathi, njl.njl. . Ukusuka kwiifoto zokulungisa ingxaki, kunokubonwa ukuba ukuhamba kwesiginali yeselfowuni kuyisikwere kwaye kukho ukungqubana, nokuba amandla okususa ubungakanani bamandla afanelekile, ngaba kuyinyani ukuba kukho iziphumo ezi-5 kwiziphumo ezi-8 ngaphandle, kwaye kufunyanwa ukuba abathengisi abaninzi abanganyanisekanga kwimarike batsala abathengi ngamaxabiso aphantsi. Ngale ndlela, ngezi ndlela zingasentla, ubuncinci kunokugwetywa ukuba ayiveliswanga kwimizi-mveliso emincinci nakwiindibano zocweyo ezincinci, kwaye umgangatho uqinisekisiwe.
Ungawuthelekisa njani umsebenzi weparameter yokukhusela
Ukuba uthenga isixhobo esisebenzisa umqondiso weselfowuni, unokuthelekisa iiparameter kunye nokusebenza kwedatha yokulungisa ingxaki ukuze ubone ukuba ungayikhusela na i-CDMA / GSM / DCS / PHS / 3G / 4G ifowuni ekhuselayo ekhusela ibhendi yonke. Nokuba ijelo ngalinye linamandla ombane awoneleyo, ewe, ukuphuma kwezitishi okungakumbi, kokukhona kuya kuba nefuthe lokukhusela. Umhlaba mkhulu, kwaye abo banxibelelana kwilizwe ngalinye bahlukile, kwaye imigangatho yenethiwekhi eyamkelweyo kwimimandla eyahlukeneyo yahlukile. Kubathengi ngokwabo, kufuneka bazi ukuba kufuneka sizisebenzise phi izixhobo kwaye yeyiphi impembelelo ekufuneka siyiphumezile, kwaye sifumane umenzi wezixhobo zobuchwephesha ukucebisa ngezixhobo ezifanelekileyo zokuxhasa indawo yakho yokusetyenziswa kunye nelizwe lokusetyenziswa.
Okwangoku, amaxabiso kushishino lokhuselo lwasekhaya lusengxakini. Ngokubamba imiqadi kunye nokutshintsha iiposti, usebenzisa i-fakes, ukunciphisa amandla, ukusasaza ubuxoki, njl., Ixabiso lezixhobo sisalathiso kuphela, hayi ukuba kubiza okungcono kunokuba ngcono. Kungcono ukhethe abavelisi abanobuchule abanokubonelela ngeenkonzo zexesha elide emva kokuthengisa. Ukuthengisa ngamanye amaxesha kuyingqondo, hayi iimveliso. Ixabiso langaphakathi ngokwalo.
Ixesha Post: Oct-17-2020
Ummandla woShishino weQuanxinyuan, indlela yeHuafan, iDalang, iLonghua, iShenzhen